‘यदि सरले मलाई बिहे गरेकाे भए म बला’त्कारकाे मु’द्दा लगाउने थिइन्’ – Dainik Sangalo
September 11, 2020 1451
भाद्र /सल्यान । सल्यानकाे बागचाैरमा एक महिना अघि शिक्षकबाट बला’त्कृत भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी १४ वर्षीया बालिका (जन्मदर्ताका आधारमा) सपना (परिवर्तित नाम) अहिले सम्पर्क बिहिन भएकी छन् । गएकाे साउन ८ गते सपनाले आफ्नै शिक्षकले आफुलाइ बला’त्कार गरेकाे भन्दै प्रहरीमा जाहे’री दिएकी थिइन् ।
लगतै रामचन्द्र फ\_रार भए । अहिलेसम्म न शिक्षक प’क्राउ परे, न सपना पक्षबाट कुनै चासाे भयाे ! पछि भाद्र १२ गते घरबाटै सपना बे’पत्ता भएकाे भन्दै उनका बुवाले ३ दिनपछि खोजत’ला’श गरिदिन भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय थारमारेमाा निवेदन दिएका छन् । (घ’टना हुँदा सपनाका बुबा बिदेश थिए भने घ’टना भैसकेपछि उनि घर फर्किएका हुन्)
अहिले प्रहरीले सपनाका नजिकका व्यक्ती र आ’राेपित शिक्षक नजिकका व्यक्तीहरुाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बाेलाएर साे’धपुछ गरिरहेकाे छ ।
कसरी भएकाे थियाे घ’टना
सपना सँग बसेपछि उनले गाडीकाे बत्ति समेत बन्द गरे । त्यसपछि सपनाकाे श’रिरमा हात लिएर छुन थाले । सपनाले असहज मान्दै शिक्षकलाइ हल्ला गरिदिन्छु थालेपछि उनिले केहि गरेनन् ।
त्यतिकैमा उता रिजर्भ गाडीमा हुनुभएकाे सरहरुले रामचन्द्र सरलाइ किन ढिला गरेकाे भन्दै फाेन गर्नु भयाे । जवाफमा रामचन्द्र सरले मेराे बाटाेमा बाइक बिग्रेकाे छ भन्नु भयाे । त्यसाेभए हामी गाडी लिएर आम भन्दै सरहरुले प्रश्न गर्नुभयाे । पर्दैन एकैछिनमा बाइक बन्छ । हामी आइहाल्छाैं, तपाइहरु जाँदै गर्नुहाेस भनेर रामचन्द्र सरले जवाफ दिनु भयाे ।’
पछिल्लाे पटक काे’राेनाकाे कारण भएकाे लकडाउनमा रामचन्द्र र सपनाकाे खासै भेट हुन सकेन् । तर उनिहरु बीच पहिले देखिनै शा’रिरिक सम्बन्ध भएकाे थियाे । त्यहि कारण सपनाकाे पेटमा दुइ महिनाकाे बच्चा बसिसकेछ । त्यसपछि दुवैमा तना’व श्रृजना उत्पन्न भयाे ।
सपनाले पनि आफ्नाे स्वस्थ्यमा भैरहेकाे प्रत्येक समस्या रामचन्द्रलाइ बताइन् । केहिदिन सपनाले औषधि पनि खाइन् । सपनाले सधै एकान्तमा च्याट गर्ने कुरा घरमा थाहा पाइसकेपछि सपनाकी दिदि र भाइले उनलाइ नि’गरानी गरेका थिए ।
बिहे गरेकाे भए घ’टना प्रहरीमा जाने थिएन
बला’त्कारकाे मु’द्दा दर्ता भएपछि रामचन्द्र केसी फ’रार भएका छन् । उनलाइ अहिलेसम्म प्रहरीले प’क्राउ गर्न सकेकाे छैन् । अहिले सपना पनि सम्पर्क बिहिन भएकी छन् । सपनालाइ रामचन्द्रले लिए वा रामचन्द्रलाइ त’नाव दिन सपनालाइ बे’पत्ता बनाइयाे भन्नेबारे अहिले प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।
पी’डित १४ वर्षिया बालिका (परिवर्तित नाम सपना)सँगकाे कुराकानीकाे आधारमा तयार पारिएकाे सामाग्री
यो खबर हामीले लेकाली अनलाईनका लागि खकेन्द्र केसी ले तयार पार्नुभएको सामाग्रीबाट लिएका हौ।
Prevयोगेश भट्टराईलाई थप जिम्मेवारी सहित कुलमानलाई पुन: नियुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओली !
Nextकक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन बारे आयो यस्तो खबर… सक्दो शेयर गरौँ !
नेपालमा कोरोनाबाट मृतकको सङ्ख्या बढे पनि मृत्युदर भने अझै कम
प्रचण्ड–माधव समूहले तालाबन्दी गरेको एक घण्टा नबित्दै ओली समूहले ताला फो,डे